कथा : ईश्वरले के गर्छ ? - Safal Stories
Home Short Stories कथा : ईश्वरले के गर्छ ?
एकदिन बादशाह अकबरले बिरबललाई सोधे ,’ ईश्वरले के गर्छ ?’ । बीरबलले उत्तर दिए, ‘ यो त सारै सामान्य प्रश्न हो । यसको उत्तर त घुमन्तेले पनि दिन सक्छ।’ त्यसपछि बीरबललाई अकबरले एकजना घुमन्ते आफू अगाडी ल्याउन आदेश दिए ।
बीरबलले एकजना घुमन्ते ल्याएर बादशाह अकबरको अगाडी हाजिर गराए । आफ्नो आशनमा बसेका अकबरले घुमन्तेलाई सोधे , ‘ ईश्वरले के गर्छ ?’ । त्यसपछि घुमन्तेले जवाफ दियो ,’ अचम्म छ ! एउटा विद्यार्थी आशनमा बसेको छ, मुकुट पहिरिएको छ र शिक्षकलाई तल राखेर आफ्नो जिज्ञासा सोध्दै छ’ ।
घुमन्तेको कुराले अकबर आफ्नो आशनबाट उठे । उनले त्यो घुमन्तेलाई माथी बोलाए, मुकुट लगाइदिए र आशनमा बसाले । त्यसपछि उनले तल गएर सोधे , ‘ ईश्वरले के गर्छ ?’ ।
मुकुट लगाएर बादशाहको आशनमा बसिरहेको घुमन्तेले हाँस्दै उत्तर दियो , ‘ ईश्वरले घुमन्तेलाई बादशाह र बादशाहलाई घुमन्ते बनाउन सक्छ ‘।
कुनै पनि पद वा सम्पत्ति भन्दा ठूलो उसको बुद्धि, विवेक र क्षमता हो । आज बाटोमा सुतेको व्यक्ति, भोली महलमा हुन सक्छ भने आज महलमा जन्मिएको व्यक्ति भोली सडकमा हुन सक्छ। यो सबै व्यक्तिको बुद्धि, मेहनत , चतुर्याईमा भर पर्छ। त्यस्तै, पदको घमण्ड गर्नु पनि बेकार छ ।
Previousनराम्रो पललाई बिर्सेर अगाडी बढ्नको लागि प्रेरित गर्ने भनाइहरु
Nextभोलीवाद र भाग्यभरोसालाई त्यागेर मेहनत गरौँ : स्वस्थानी न्यौपाने